Dhangadhi Khabar | गोलभेँडाको सुरक्षा गर्न बन्दुकधारी
पाकिस्तानमा गोलभेँडालाई सुरक्षा दिन बन्दुकधारी गार्डहरु राख्न थालिएको छ । किसानको खेतमा होस् या पसलहरुमा निक नहोस्, त्यहाँ बन्दुकधारीलाई राख्न थालिएको सामाजिक सन्जालमा व्यापक छाएको छ । यसबारे मानिसहरुले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
खासमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि यस्तो भएको हो । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि कराँचीमा टमाटरको मूल्य ३२० रुपैयाँ प्रति किलो पुगेको छ । चर्को मूल्य र चोरीको आशंकाका कारण किसानहरुले सशस्त्र सुरक्षागार्डलाई राख्नथालेका हुन् ।
फेरि केही दिनअघि मात्र पाकिस्तानको सिन्धको बादिन भन्ने सहरमा टमाटरले भरिएको ट्रक लुटिएको समाचार पनि बाहिर आएको छ ।
सोमबार ०२, मङि्सर २०७६ १२:२७ मा प्रकाशित
सिन्दूर हालेर भित्र्याएकी पत्नीको बिहे गराए, दाइजोमा दिए अढाई वर्षीय छोरा !
बिहे गर्नु अघि तिन महिने तालिम लिनै पर्ने,कोर्ष पास नगरे बिहे गर्न नपाइने !
संविधानको कसम खाएर विवाह !
पसल फोडेर चोरले प्याज लिए, पैसा लिएनन्
घर किन्दा श्रीमती सित्तैमाः जुन विज्ञापनले संसार हल्लायो